Hilbaha fardaha oo saansaan lagu garto reeba - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hilbaha fardaha oo saansaan lagu garto reeba
La daabacay onsdag 17 april 2013 kl 11.09
Qiyaastii boqolkiiba shan tijaabooyinkii ey waddammada ku bahoobey ururka Midowga Yurub dalbadeen ayaa laga heley haraa hilibka fardaha. Halka in hal ka yar boqolkii laga heley daawada la mamnuucey ee lagu magacaabo fenylbutazon.
Haraaga hiblabaha fardaha ee tijaabooyinka lagu heley ayey waddammada laga heley ugu badnaayeen Faransiiska, oo ey soo raaceen waddammada Griiga iyo Latfiya.
Dalka Iswiidhen ayaa tijaabooyin gaarsiisan 119 laga heley mid haraa hilbaha fardaha, midkaasina oo laga heley tijaabo lagu sameeyey hilib lagu sumadeeyey inuu ahaa hilib lo'aad uu noqday hilib fardeed. Halka dhanka kale aan tijaabooyinkii cunnada ee dalkan lagu sameeyey aan lagu arag daawada fenylbutazon.
Tijaabooyinkaasi waxey muujiyeen in lagu tallaabsadey falal macaamiisha lagu khiyaaneyo ee aaney la xiriirin ammaanka cunnada. Hoggaanka ururka eu-da ayaa soo ban-dhigi doona tallaabooyin ey waddammada xubnaha ka ah ururku ku dhimi karaan mustaqbalka khiyaamooyinka noocaasiya. Iyo sidoo kale in la xeereeyo ganaax ka argagixiya in summad aan dhab ahayn lagu sumadeeyo cunnooyinka iyo qiimo ka sarreeya macaashka khiyaamada laga faa'iidi karo.